Akụkọ Bible: Pita Agaa Ịhụ Kọniliọs - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ọ BỤ Pita onyeozi guzo n’ebe a, ndị ahụ nọ ya n’azụ bụ ndị enyi ya. N’ihi gịnị ka nwoke ahụ ji akpọ isi ala enye Pita? Ò kwesịrị ime nke a? Ị̀ ma onye ọ bụ?
Nwoke ahụ bụ Kọniliọs. Ọ bụ ọchịagha ndị Rom. Kọniliọs amaghị onye Pita bụ, ma a gwara ya ka ọ kpọta ya n’ụlọ ya. Ka anyị chọpụta ihe kpatara nke a.
Ndị mbụ na-eso ụzọ Jizọs bụ ndị Juu, ma Kọniliọs abụghị onye Juu. Ma ọ hụrụ Chineke n’anya, ọ na-ekpegara ya ekpere, na-emere ndị mmadụ ọtụtụ ihe ọma. N’otu ehihie, otu mmụọ ozi pụtara n’ihu ya, sị ya: ‘Omume gị dị Chineke mma, ọ ga-azakwa ekpere gị. Ziga ndị ikom ka ha kpọta nwoke a na-akpọ Pita. Ọ nọ na Jọpa, n’ụlọ Saịmọn, onye bi n’akụkụ oké osimiri.’
Kọniliọs zigara ndị ikom ozugbo ịchọ Pita. N’echi ya, mgbe ha na-eru Jọpa nso, Pita nọ n’elu ụlọ Saịmọn. N’ebe ahụ, Chineke mere ka Pita chee na ya na-ahụ ákwà sara mbara nke si n’eluigwe na-arịdata. Ụmụ anụmanụ dị iche iche dị n’ime ya. Dị ka iwu Chineke si dị, ụmụ anụmanụ ndị ahụ adịghị ọcha oriri, ma n’agbanyeghị nke ahụ, otu olu sịrị ya: ‘Bilie, Pita. Gbuo, rie.’
Pita zara, sị: ‘Ee e! Eritụbeghị m ihe rụrụ arụ.’ Ma olu ahụ sịrị Pita: ‘Kwụsị ịkpọ ihe ndị Chineke sịrị ugbu a na ha dị ọcha ihe rụrụ arụ.’ Ihe a mere ugboro atọ. Ka Pita na-eche ihe ọ pụtara, ndị ikom ahụ Kọniliọs zitere bịaruru ụlọ ahụ, wee jụọ maka Pita.
Pita gbadatara wee sị ha: ‘Ọ bụ m ka unu na-achọ. Gịnị mere unu ji bịa?’ Mgbe ha kwuru na otu mmụọ ozi gwara Kọniliọs ka ọ kpọta Pita n’ụlọ ya, Pita kwere iso ha jee. N’echi ya, Pita na ndị enyi ya wee jee ịhụ Kọniliọs na Sesaria.
Kọniliọs akpọkọtawo ndị ikwu ya na ndị enyi ya. Mgbe Pita bịarutere, Kọniliọs kelere ya. Ọ dara n’ala kpọọ isi ala n’ụkwụ Pita, dị ka ị na-ahụ n’ebe a. Ma Pita sịrị ya: ‘Bilie; mụ onwe m bụ mmadụ nkịtị.’ N’ezie, Bible na-egosi na o zighị ezi ịkpọrọ mmadụ isi ala. Anyị kwesịrị ife naanị Jehova.
Pita kwusaara ndị ahụ zukọtaranụ ozi ọma. ‘Ahụrụ m na Chineke na-anara ndị niile na-achọ ife ya ofufe,’ ka ọ sịrị ha. Ka ọ ka kpụ okwu n’ọnụ, Chineke zitere mmụọ nsọ ya, ndị ahụ wee malite ịsụ asụsụ dị iche iche. Nke a juru ndị Juu ahụ na-eso ụzọ Jizọs bụ́ ndị so Pita bịa anya, n’ihi na ha chere na Chineke na-anabata naanị ndị Juu. Nke a kụziiri ha na Chineke adịghị ewere ndị si n’otu agbụrụ dị ka ndị ka agbụrụ ọzọ mma ma ọ bụ dị ka agbụrụ dị Chineke mkpa karịa agbụrụ ọzọ. Nke ahụ ọ́ bụghị ihe dị mma nke anyị niile kwesịrị ịdị na-echeta?
Ọrụ 10:1-48; 11:1-18; Mkpughe 19:10.
Ònye bụ nwoke ahụ na-akpọ isi ala na foto a?
Gịnị ka otu mmụọ ozi gwara Kọniliọs?
Gịnị ka Chineke mere ka Pita hụ mgbe ọ nọ n’elu ụlọ Saịmọn na Jọpa?
N’ihi gịnị ka Pita ji gwa Kọniliọs na o kwesịghị ịkpọrọ ya isi ala ma ọ bụ fee ya ofufe?
N’ihi gịnị ka ndị Juu bụ́ ndị na-eso ụzọ, bụ́ ndị ha na Pita so, ji nwee ihe ijuanya?
Olee ihe dị mkpa anyị kwesịrị ịmụta site n’ojije Pita jere ịhụ Kọniliọs?
Gụọ Ọrụ Ndịozi 10:1-48.
Gịnị ka ihe Pita kwuru n’Ọrụ Ndịozi 10:42 na-egosi banyere ọrụ ikwusa ozi ọma Alaeze ahụ? (Mat. 28:19; Mak 13:10; Ọrụ 1:8)
Gụọ Ọrụ Ndịozi 11:1-18.
Gịnị ka Pita meziri mgbe ntụziaka Jehova nyere banyere Ndị Jentaịl bịara doo anya, oleekwa otú anyị pụrụ isi ṅomie ihe nlereanya ya? (Ọrụ 11:17, 18; 2 Kọr. 10:5; Efe. 5:17)
Chineke Anaghị Ele Mmadụ Anya n’Ihu
Olee ihe anyị ga-amụta ná nleta Pita letara Kọnịliọs?